आल्मुनियम, स्टिल, माटो कस्तो भाडाँमा खाना पकाउँदा स्वास्थ्यका लागी लाभदायक ! सबैले जानीराखौं – Annapurna Daily
आल्मुनियम, स्टिल, माटो कस्तो भाडाँमा खाना पकाउँदा स्वास्थ्यका लागी लाभदायक ! सबैले जानीराखौं
On Jul 15, 2021 7,410
खानेकुरामा विभिन्न पोषक तत्व हुन्छन् । तर खानेकुरा पकाउने र खाने क्रममा ती सबै पोषक तत्व हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं । खानेकुरा पकाउने क्रममा कतिपय पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । त्यति मात्र कहाँ हो र रु हामीले प्रयोग गर्ने कति भाँडा त यस्तो हुन्छ जसले पोषक तत्व नष्ट गर्ने मात्र होइन हानिकारक रसायन समेत पैदा गर्छ । त्यस्ता भाँडामा खानेकुरा पकाउँदा हामीलाई अनेक रोग लाग्ने गर्छ ।
पित्तलको भाँडा: पित्तलको भाँडाको तापमा गुड कन्डक्टर हुन्छ । पुरानो जमानामा यसको प्रयोग धेरै हुन्थ्यो । पित्तलको भाँडामा खाना पकाउँदा र खाना खाँदा जुका पर्ने, कफ र वायुदोषको समस्या हुँदैन । यस्तो भाँडामा खाना बनाउँदा केवल सात प्रतिशत मात्र पौष्टिक तत्व नष्ट हुन्छ । पित्तलको भाँडाले एसिड र नुनसँग प्रतिक्रिया गर्छ । त्यसैले अमिलो र नुनिलो खानेकुरा यस्ता भाँडामा पकाउनु उपयुक्त हुँदैन । अन्यथा फुड पोइजनिङ हुन सक्छ ।
काँस: काँस चाँदीभन्दा थोरै सस्तो हुन्छ । अतः यसको प्रयोग मध्यमवर्गीयमा अधिक हुन्छ । काँसको भाँडामा खानेकुरा पकाउँदा केवल ३ प्रतिशत मात्र पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । साथै, खाना खानको लागि योभन्दा राम्रो अर्को धातु छैन । यसले तपाईंलाई एक होइन, अनेक फाइदा मिल्छ । काँसको थालमा खाना खाँदा रगत सफा हुनुका साथै भोक बढाउँछ । यद्यपि काँसको भाडामा अमिलो चिज राख्नु उपयुक्त हुँदैन ।
माटो: माटोको भाँडा पनि प्रचलनमा छ । माटोको भाँडामा खाना खानु एकदमै राम्रो मानिन्छ । माटोको भाँडामा खानेकुराको पोषक तत्व कति पनि नष्ट हुँदैन । माटोको भाँडामा खाना पकाउँदा पोषक तत्व मिल्छ । दूध वा दूधबाट बनेको उत्पादन राख्न र खानका लागि त माटोको भाँडा सर्वोत्तम नै हो ।
ननस्टिक भाँडा: ननस्टिक भाँडाको सबैभन्दा ठूलो विशेषता के भने यसमा तेलको प्रयोग अत्यान्तै कम गरे पुग्छ । यसमा खानेकुरा डढ्ने वा टाँसिने समस्या हुँदैन । त्यसैले अहिले धेरैको घरमा ननस्टिक भाँडा राख्ने गर्छन् । यद्यपि तपाईंलाई थाहा छ यस्तो भाँडावर्तनले स्वास्थ्यमा केही प्रकारका समस्या ल्याउन सक्छ । ननस्टिक भाँडावर्तन धेरै तातो गर्दा यसको सतहमा निस्कने रसायन निकै हानिकारक हुन्छ ।
फलाम: गह्रौं र महँगो हुन्छ फलामको भाँडा । यद्यपि खाना पकाउनका लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ फलामको भाँडामा । शोधकर्ताका अनुसार फलामको भाँडामा खानेकुरा बनाउँदा उक्त खानेकुरामा फलाम तत्व पनि प्राप्त हुन्छ, जो स्वास्थ्यका लागि आवश्यक हुन्छ । फलामको भाँडामा फोलिक एसिड पाइन्छ, जसले रगतको मात्रा बढाउँछ । यसका साथै फलामले केही प्रकारको रोग पनि निर्मूल गर्छ । यसले शरीर सुन्निने र पहेँलोपन आउन दिँदैन । यद्यपि फलामको भाँडामा खाना पकाउनु मात्र उपयुक्त हुन्छ, खानका लागि भने होइन ।